Me Razafimanantsoa Hanitra : tsy misy tambiny ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana – MyDago.com aime Madagascar
Nisy ny fivoriana tanyPretoriataorian’ny tsy fahatongavan-dRavalomanana Lalao, ny Sabotsy 04 Feroary 2012, lasa teo, hoy Me Razafimanantsoa Hanitra. Fampiantsoana maika ny fat sy ny Ankolafy Ravalomanana, hoy izy, io fa tsy fanasana. Nyantonydia ny hoe : fa maninona no misy “NOTAM”. Omaly ianareo milaza fa tsy asiana “Notam” nefa nasiana indray. Tany amin’ny fiadidiana ny tetezamita mihitsy, hoy hatrany izy, no nivoaka ny hevitra ny amin’izay “Notam” ho an’ny Filoha Ravalomanana Marc ary niverina indray tamin’ny Ravalomanana Lalao. Mazava anefa ny voalazan’ny tondrozotra fa ny sesi-tany rehetra dia andraikitry ny fitondrana no miaro ny ainy. Tsy tanteraka izany kanefa tsy mifendro amin’izany isika, hoy ity mpanao politika ity, fa raha ilaina dia lasa indray isika amin’ny Sabotsy izao, mitsena azy. Momba ny fidirana ao anaty rafitra izay miteraka resabe eo anivon’ny mpitolona dia nambaran’ny filoha lefitry ny CST Razafimanantsoa Hanitra, fa fialana nenina no atao anatin’io, fa izahay kosa tsy voavidy vola amin’ny vola maloto. Ny fifanarahana nataonay tamin’ny vahoaka, hoy izy, dia ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana, ary tsy misy tambiny izany. Arakaraky ny zavamisy eto amin’ny firenena hoy ny fanazavany, no hijanonana ao. Raha nilaza hisintaka isika, diatongasaina ry zareo fa avelao hody iny rangahy iny. Misy indray anefa ny sasany mialza fa tsy avela hody izy. Raha mbola ilaina ny fijanonana ao anatin’ireo rafitra ireo, hoy ity mpisolovava ity, dia tsy miala ao izahay. Atao izay ialan’ny Ankolafy Ravalomanana satria mahita ny maloto rehetra ataony ireo ao. Misy ny Ministera izay efa gorobaka hoy izy. Avoakatsika izany amin’ny fotoanany fa efa manana porofo amin’izany isika.
Vita ny iraka
Ny lalàna mikasika ny CENI sy ny lalàm-pifidianana, dia anisan’ny nandalo teo anivon’ny rafitra mpanao lalàna roa tonta nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo. Ny asan’ny Ankolafy Ravalomanana tao anatin’ny governemanta, hoy ity filoha lefitry ny CST ity, dia vitan’ny Ministry ny Ankolafy avokoa. Ny 40% tsy vitan’izy ireo dia vitan’ny CST sy CT Ankolafy Ravalomanana. Ny 90% n’ny lalàna dia vitantsika, hoy izy, no nampiditra azy tao, noho izany dia tsy matahotra ny fifidianana izay mitranga eo. Ny momba ny lalàm-pifidianana, dia nambaran-dRazafimanantsoa Hanitra, fa ny hevitra izay notohanan’ny Ankolafy Ravalomanana dia tafiditra avokoa. Ny fahavalonay ao amin’ny CST ao araka ny fanazavany, dia ireo lasa amboadia. Nisy tamin’izy ireny no nivadika, ka tsy tafiditra tao anatin’ny Ankolafy Ravalomanana. Lasa any amin’ny Tgv izy ireny ankehitriny.Noho izany dia miavaka tsara ny tsiparifary sy ny vary. Nilaza ny Me Hanitra fa efa tafaresaka tamin’I Dada, ary niteny ity farany hoe aza manahy fa tsy maintsytongaalohan’ny 29 febroary izao ny tenany. Na dia natao sorona ao anatin’io fitondrana io aza izahay dia vonona hatrany ny hamerina an’I Dada, hoy izy.
Me Hanitra Razafimanantsoa : manohana ny filoha Ravalomanana tsy misy fepetra !
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 février 2012 21 février 2012 Catégories Politique
29 réflexions sur « Me Razafimanantsoa Hanitra : tsy misy tambiny ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana »
Njara a! misy ahitsiko kely fa hay i dada izany ho avy alohan’i le 29 ka sy olana izany ilay
hetsika raha ohatra ka mitombona @’io daty voalazanao io .
Toa mitondra fanantenana be ilay sarin’i M Hanitra mitsikitsiky be io ry dà e! sa ahoana ???enga anie!!ny sakoroka
aloha tsy maintsy hisy fa kosa ny fanantenana dia tsy maintsy hapetraka foana.
Izay vao harosoko eto ilay fomba fandaminana @ fahatongavan’i Dada,
– tokony hatao maraina mba tsy hisy ny fanararaotana @ fodian’ny olona @ HARIVA.
-tokony koa ampiana ny mpandamina @ faran’ny misy ireo vahoaka mihintsy dia tokony tsy hiala eo ry zareo mandra-
pahalasan’ireo olona mba tsy ho sambosambotin’ireto Gidro na ho DAROFANY ireo vahoana toy ilay farany tei iny, hanaovany
20 février 2012 à 22 h 57 min
Raha ohatra ka ao aorian’ny fahatongavan’i dada ilay hetsika mety be,
efa misy hery tsara ny olona eo.Tokony ho mailo ihany koa anefa @
fanararaotana samihafa eto,satria maimbo rà ny foza,ka tsy maitsy ahavanona zavatra hafahafa eo.
Tsy tapaka ny miteny aho hoe mba asio vidéo mba tena ny feony na ny tena teniny mihintsy no heno e ! Ny fitsikiny fotsiny tsy ampy
Manakaiky ny marina ny feo ary miala ny tsaho
Misaotra Solo RAZAFY
21 février 2012 à 1 h 51 min
Fantatray ny fitiavanao ny Malagasy Dada:
Mba alefaso rangaha ilay vidaka fa aza hatao an’io moa e!
Azafady tompoko!!aza mba manao sangy ratsy toa izao moa ry Solo Razafy fa tsy mety a!!
mampanaintaina be fotsiny ity izy ! izany moa e!!ilay VIDEO oah e!!!RAHA RITRAKAREO RE
ry Mydago hajaina eeeeee!!!!mijaly ny zanaky dada re e!!mangetaheta fahamarinana .
Mamay tokoa koo! Amin’izay dia tena hita hoe ilay sary tsy dia manendrika loatra an’i Me Hanitra no aseho !!! kay kay kay !Fa manja ihany izy na izany aza e !
Efa nihezaka ianao MeHanitra, fa dia tohizo a !
Ny prob-nay mantsy dia ity :
Tena ilaina ny fiverenan’i Dada ho an’ny Tanindrazana
anefa mba tsinjovy koa ny ainy sy ny fifidianana e !
Mba zarao tsara re Tompoko ny amin’ny olona handeha hitsena an’i Dada, ary….
Koa ireo hilahatra miray hina amin’ny fandakàna an’i Domelina e!
Aiza kosa ianreo ry Mme Naika – Rakotoamboa-Raveloson Constant, Zafilahy o !
Aza misaratsaraka e – MIARISA HINA re mba iangaviana e !
Zavatra roa tsy hay sarahina ireo, ary efa fantatrao tsara izany !
Ary mba sarotina koa ity dà ity marina a!manja foana io fa aza matahotra ry se a!
Rahoviana marina moa ilay fotoana e! sa i dada ihany no manome ny vao2 farany????
Tsindrin-daona ny zanak’i dada.
Dia mba ratsy fanahy ery i SOLO RAZAFY marina a!!izahay sy i da ato efa manaintaina be ery
hijery sy hiaino an’i ANDRIAMBAVILANITRA sa ahoana ry da????mampalahelo fa tsy hananana
firy ny olona toa azy. izy no azo lazaina fa voankazo RARA.
21 février 2012 à 13 h 27 min
Mahavita izay vitany izy aky a ! Tsy misy afaka ny hanome tsiny azy raha izaho, raha tsy hoe : adinony angaha fa ilaina dia ilaina miaraka amin’ny fodian’i Dada , ny manomana fifidianana.
Nefa mino aho fa efa mirotsaka amin’izany Atoa M. Rakotoarivelo sy Zafilahy ka !
Ny tena faniriako moa dia efa voalazako ihany :
MANIRY AZY IREO (Moov Ravalo -Zafy)
MBA …..HIRAY HINA – HITAMBATRA HO HERY IRAY !
Ary raha mba manome hira ho an’i Me Hanitra aho ry bavy ???!
Fa alohan’ny hira dia mampahatsiaro anao Me Hanitra mba ho atao izay hanalavitan’itony mpanao gazety frantsay itony an’i Dada :
Ity hira ity dia atolotr’i Njara ho an’i Me HANITRA : hi hi hi ! (hira Hamelan-kafatra e !)
kAY ! dia ho betsaka ny ho tezitra amiko nanolotra hira ho an’i Me Hanitra izay voatondro ho mpamadika !
Tsy maninona e aoka ho zakaiko , fa ity misy vaovao efa misy mahalala ihany, mba misy hisainana :
Des entrainements de sauts en parachute pour l’Armée Malagasy , precisement le 29 Fevrier 2012.
Moramanga et Arivonimamo et Ivato seront fermés aux trafics aeriens selon DES NOTAMS deaja en cours.
MAIS………. Pourquoi EXACTEMENT le 29 Février 2012 ?
Fa namadika an’iza koa i M.Hanitra ??tsy mino kosa aho kah!!!mba mapiresaka koa izany!!!
aza miraharaha izay heritreretin’ny olona izany , avelao ny olona hieritreritra izay heritreretiny
tsy olana izany, izay hataonao hataovy Tsara fotsiny dia rehefa madio ny heritreritra dia ampy.
Tsara be izany vao2 mitontona izany sahady,efa voalaza mantsy fa tsy maintsy handray andraikitra ny TROIKA raha vao
mbola mianakendry eo i domelina ka tsy ho tafa ilay fodian’i dada alohan’ny 29fev. Miakapokapoka sahady izany koa inona
moa, hanoana ity rivo-doza mitatao ho azy indray izany i domelina ,avelao handrangitra ihany fa ho avy ny azy, tsy fahafirin’
iza akory izy ity!!tsy hainy fa Ben Laden sy Kadaffi aza tena tompon’ny mokon-doha fa LAVO, ka izay taimbodiana kely io
no mba hiana-kendry eo.
21 février 2012 à 16 h 56 min
Tena velom-pisaorana anao aho bavy amin’izany teninao mikasika an’i Me Hanitra izany !
Tena mahafaly ahy mihitsy !
Lasa toy ny « club » kely mahafinaritra ny eto @ ny Mydago izany an !
Misaotra bdb aloha amin’ireo hirahira e ! Tena mpakafy Elvis ny aty ary membre mihitsy ao @ ny « Elvis my hapiness »
Tsetsatsetsa tsy aritra ihany izany,fa, lasa ny eritreritra hoe : raha toy izao toe-tsaina miramirana sy feno fanantenana hita eto @ ny Mydago izao daholo no mameno ny sain’ny mpanohana rehetra an’i Dada dia handroso ny tolona !
Ny hitenenako izany dia hita tokoa fa tsy mahita afatsy ny mpisera eto @mydago ianao ranavalona ka dia gaga hoe : f’angaha misy olona manenjika i Me hanitra sns …?
Indrisy tena misy dia misy tokoa ,ary tsy izy irery ihany fa ireo rehetra lazain’ny sasany hoe « niditra système » manomboka @ i Mamy Rakotoarivelo,Zafilahy …
Mpanohana tokoa an’i Dada ireo mpanenjika an’ireto ao @ CT sy CST ireto.
Raha toa miditra ao @ny site tim-madagasikara dia arakarak’izay « sujet » mivoaka no ahitana azy.
Mampalahelo indraindray satria lasa fitsikerana sisa no mibahana oa @ny ady-hevitra.
Na izany aza dia manana fanantenana ny tena fa tsy maintsy hiseho ary handresy ny marina !
lire : « happiness »
21 février 2012 à 18 h 32 min
Samia mitondra am-bavaka ny fiverenan’i Dada, fa misy tena mifofo ny ainy ireo tsivalahara matahotra mafy ny fiverenany!!!Ny aina tsy ananan-droa ka aoka ho mailo sy hitandrina tsara mba hampandamoka ny teti-dratsy rehetra.Dia mirary ny rehetra mba ahita ny farany amin’izao fotoan-tsarotra lalovan’ny firenentsika izao.
21 février 2012 à 18 h 44 min
Saika adinoko,io cameraman teo @ ny Magro omaly io dia anglisy fa tsy fran-‘tay’ akory.Antenaina fa mba ho aeliny arak’izay tokony ho izy eran-tany io,mitory fa :
-misy dia misy tokoa ny mpanohitra izao fitondrana nangalarina izao any Madagasikara,na dia niniana fotsiny tsotr’izao hafenina ho toy ny tsy misy aza izany hoe OPPOSITION izany
– ary tsy vitan’ny manohitra ity fanonganam-panjakana fotsiny ihany,fa, indrindra mitaky tsy anki-ato ny fodian’ny filoha Ravalomanana,ary tsy vao izao fa efa TELO TAONA NGARANGIDINY IZAO ,ary dia saika isan’andro isan’andro,eo amin’io toerana magro io!!!
et d’une manière pacifique,manomboka amin’ny fotoam-bavaka foana,n’inon’inona lokon’ny andro!
Vao mivoaka ao dia fandrahonana ,lacry,basy …no asetry an’ireo vahoaka.
Tsy misy fisaorana ry dà a!hita @ hazo eny foana ny voany.
Marina tokoa ry Antenaina fa eto @ Mydago no tena handaniako ny androko.
Ilay miramirana indray dia hararaotina aloha fa tsy mbola hay izay miandry atsy ho atsy sady eto ny hitako aloha
dia MIARA ORY dia miaraka Faly ihany koa ny fe-kevitr’i ny foza ihany eto no tsy miova fa MANARATSY FOANA
no mba hainy.
Soa koa fa tsy henoko izany fanaratsiana ny momba an’i Zafilahy sy M Hanitra izany ,HATOKISAKO ireo fa raha i
Mamy R kosa dia izaho an’isany manakiana azy ary tsy dia azoko ANTOKA loatra.
Ny an’i Nantenaina no tonga aloha fa izao vao saika hanamafy fa TENA MINO ve Njara
fa frantsay io????
Aoka re ry Nantenaina fa makarary Fo ny mahazo ireo vahoka eo @ Magro ireo fa kosa mino aho fa tsy maintsy
handresy ny tolona ary ho tonga ventiny ny rano natsakaina.Mahatsiaro azy ireo am-bavaka isanandro ihany koa aho.
Amiko dia efa mifono zavatra maro ny tsy hanomezana Buro an’i M.Hanitra,
ka tsy izany mihintsy no hinoako fa MAMADIKA izy.Tsongo fo-tena tsongo fon’olona.
Tsy mety mamadika angaha hoe izy dia HINO aho torak’izany koa i Zafilahy.Aleo aloha ho hita ny porofo rehetra
mitohoka @ tendany vao HINOHINO foana.
21 février 2012 à 19 h 25 min
Misaotra an’i Antenaina aloha fa misy ho tsakoina e ! Sanatria tsy maso aho, tiako dia tiako rehefa misy manakina kely toy ireny.
Asa raha tadidin’i Antenaina fa nomarihiko tsara hoe ny mpanao gazety frantsay « toy itony ». Amiko dia milaza izany fa tsy io ampisehoiko io akory no tena vazaha, fa ny vazaha amin’ny ankapobeny izay missika toy ialy tao anaty avion nametraka fanontaniana tamin’ny fomba tsy dia nankasitrahako loatra(avis personnel), ka manosiosy ny mpanao gazety malagasy ho ao aorinany !
Asa mazava kosa angamba ny amin’iny ??? Tsy olanamihitsy fa aleo milaza toy izay, toy izay manome tsiny any AMBADIKA !
Mbola nomarihiko ihany koa mantsy, fa ilaina ihany ny fanapritahana ny vaovao RAHA…..MAMOAKA VAOVAO MBA MILAZA IZAY TENA IZY, FA TSY TOa an’i RFI izay zara raha milaza ny vaovao, ary vaovao manasoa sy manohana ny fitondràna frantsay hatrany. Tsapako tsara fa ny tsy fitiavako ny frantsay no tena votoatin’ny resaka, anefa angamba efa nilaza imbetsaka teto koa aho, fa na izaho aza, mba mana-namana frantsay ihany. FA KOSA….ny ankabeazan’ny frantsay amiko dia Mpiatsara ivelatsihy sy mihevitra ny tenany ho ambony noho ny hafa FOANA, ka mivoaka min’ny zavatra lazaiko ny tsy fitiavako azy.
Raha mahatezitra izany dia ialako tsiny indrindra fa izany no ao an-tsaiko.
Tiako ny manambara eto, fa izahay, amin’izao fotoana hiomanana ny fihavian’i Dada izao, dia miresaka amin’ny Radio avy any ivelany (Anglophone justement) mba hanao reportage izay mety ho IZAHAY no hamoaka azy .
Miala tsiny fa voatery manazava kely mba tsy hisian’ny olana e!
Aza misy mora sendaotra, fa tena tsara ny hifampiresahana sy hifanazavàna toy izao !
Tandremo !! Aza dia mora sodòka ry sisterjane !! Manaova ankety, dia lazao eto ny mahazo an’i Manoela !
Miverina kely aho Antenaina :
Vao haingana kosa aho no nilaza teto hoe :
Raha ny critique dia tsy amiko intsony, fa ny hezaka amin’ny soso-kevitra no mba hiezahanay !
Mbola tsy ni-critique mihitsy an’i Me Hanitra raha izaho ohatra,,, au contraire ;), sa ahoan ry bavy ! ise tsapako fa nisy zavatra tsy zakan’ise nolazaiko ka tsy aleo ve mifanazava a reitsy ?! Sa diso kosa angamba ny eritreritro ???
21 février 2012 à 19 h 39 min
Ny momba an’iza io ry dà???inona no tsy zakako??mahazaka aho matoa miditra etö fa aza matahotra.
Fa naninona koa i Manoela ry Kintana??
Itony no milaza ny fihetsiky ny mapanao gazety frantsay :
Re: tananews n’aime pas kon explike comment saisir un juge d’instruction
Envoyé par: )
Date: mar 21 février 2012 11:13:17
dans le premeier post je relève la complicité de tous les médias francais avec la situation malgache…tous…et,si l’on peut comprendre que tous sont sous perfusion financièr de l’état et donc aux ordres malgré leurs effets de manches (marianne rue 89 média-part et tous les vieux nouvel obs,le point le monde fiagro libé TOUS palpent de la thune car sinon il ne serait pas viable et a part Dassault qui peut se payer ce luxe….et bergè (ce gros radin tiendrait pas longtemps a voir sa thune fondre neile au soleil )..bref, reste un seul journal dont la france peut encore dire qu’il est indépendant et fait du bon travail…le canrd enchainé…..
ils sont indépendants jusqu’ a ne prendre aucune pub….aucune tentation donc…les recettes seules sont la rentrée d’argent et ma foi…ils se payent grassement car les banèfices sont là…
mais pourkoi pas un article sur Madagascar…aussi,la question doit se poser…les journaux francais donc parisiens sont -ils complices et le jour venu devraient -ils payer des dommages et intérets devant cette omerta sur l’océan Indien ou tout est très très très simple.
And so….very very good night for
See you soon Antenaina !!! 😉
Oh la la la ! Njara ,tandremonao fa olona sentimentale be ny aty an ! Vao mahita azy sy mihaino ny feony (exceptionnels)dia efa misentosento be ery ! 2007 : 30è anniversaire-ny nahafatesany,voa-enregistrer -ko daholo daholo (any am-piasana an!) ny emmission rehetra tao @ ny RTL,nandritry ny une semaine ! Poa to-izay dia jifotra ny DVD,CD Fnac,virgin !
Bon! divertissement kely e !
Mamerina fisaorana e !
Matoa ny gouverneur BCM mifikitra @ sezany dia ny fataorany fa hivaoka ny vola nahodiny izy sy Ravalomanana
Pov con!!ary maninona no MITAPIFIPIFY aty ???ataovy mafy an-tanana tsara ilay WC fonday!!!
efa akaiky ilay fotoana!!!hakapoy @ vato ny loha rehefa tsy mahazaka demôkrasie
Précédent Article précédent : Tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena hoy Ranjeva Raymond
Suivant Article suivant : Nitondra fanampiana ny tra-boina ny « zanak’i Dada »